Foornada Alwaaxda gubta, Foornada Kaambeynka Dibadda, Foornada Beerta - Dahab
Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd. waxay diiradda saareysaa soo saarista shooladaha qoryaha kaamamaynta muddo 15 sano ah Shiinaha, soo bandhigista joogtada ah ee qalabka cusub iyo teknolojiyadda, oo leh hibada ugu wanaagsan ee horumarinta iyo cilmi baarista, waxay ku siinayaan xalal hal-tallaabo ah si ay kaaga caawiyaan inaad ballaadhiso suuqa.
Sida ugu wanaagsan ee loo furo waa in la qaato foornada lagu kariyo ee lagu kariyo dibadda.
Foornada beerta waxay muujisaa shakhsiyadda waxayna muujisaa dhadhanka qofka, sidaa darteed waxay ugu dhowdahay qalbiga dadka.
Foornada Gawaarida la qaadan karo
Saaxiibkaaga yar markii aad safraysid, Foornada yar ee korontada ku shaqeeya waxay kuu soo gudbin doontaa casho kulul oo kulul wadada dhinaceeda.
Qalabka Birta ahama & Qalabka
Waxaa si aad ah caan ugu ah isku dhafka quruxda iyo tayada, iyaga oo ay weheliso fududeynta kaamamaynta, karinta, kululaynta, dubitaanka hilibka, laakiin sidoo kale xariiq muuqaal qurxoon.
STOLE GOLDFIRE ALAABADA
Tikniyoolajiyadda Shiinaha ayaa ah tan adduunka ugu wanaagsan siyaasadda GOLDFIRE ee "Lagu Sameeyay Shiinaha" waxaa loola jeedaa heer sare, geeddi-socod joogto ah oo horumarineed iyo wax soo saar gudaha Shiinaha ah.
Waxay si dareen leh u dareemi kartaa ololka dhabta ah waxayna leedahay saameyn qurxoon oo aad u wanaagsan, taas oo ah aalad aysan qalabka kale ee kululaynta laheyn.
Kaamamka Biyaha Lagu kariyo ee Kaamamka ah, Bannaanka Alwaaxda Gubashada, Foornada Cuntada lagu karsado, shooladda birta ah ee birta ah, Kaam Dabka Gubay, Teendhada Qoryaha Teendhada,